Ukuhamba kwezinyawo nezinyawo: ividiyo, ubuchwepheshe, izinkomba
Umthelela wokuphulukisa unyawo nezinyawo ukuhlunga emzimbeni womuntu
I-foot and foot massage inamakhono aphulukisayo okuphulukisa ngenxa yobuchwepheshe obusetshenzisiwe bokuthinta iziphetho ezibalulekile ezikhona ezinyaweni zomuntu. Uma ugoqa izinyawo ngokuqondile, ukuhamba kwegazi kuthuthuka, kwabesifazane, amathuba okuba nemivimbo ye-varicose incishisiwe. Ngemuva kokufunda, ngokuvamile kuqukethe izikhathi ezingu-7-8, impilo ejwayelekile iyathuthukisa, kukhona ukukhanya okumnandi nokufudumala emilenzeni.
Amaphuzu okulashwa onyawo lomuntu
Amaphuzu okusikhipha ngezinyawo ayinqwaba. Lokhu kugcwala kakhulu ngokwemigomo yesiguli emzimbeni wethu, ngakho-ke lapho ukubutha kubalulekile ukubambisana nabachwepheshe ababala ngokunembile amandla nendawo yokuchayeka. Isithombe ngezansi sibonisa amaphuzu amakhulu okuphuza onyawo, okumele ucatshangelwe uma wenza inqubo.
Lapho evezwa ezindaweni ezithile ezinyaweni, izinqubo zangaphakathi emzimbeni zithuthukisa, izenzakalo ze-spasmodic ezithombeni nasezintanjeni ziqedwa.
Incazelo yendlela yokuhamba ngezinyawo nezinyawo
Inqubo yokwenza massage yomlenze nomlenze ihlukaniswe ngezigaba ezimbili. Eyokuqala imfushane, ilungiselelo, okwesibili yilapho kwenziwa khona inqubo ngokwayo.
Thatha indawo ekhululekile. Njengomthetho, baqala ukulala emathunjini, bese bejika emhlane, kodwa kunezinye izindlela lapho ukusikhipha khona kungaba khona endaweni yokuhlala kwesiguli;
Ochwepheshe kufanele bakhethe ukhilimu wokusikhipha ngamafutha abalulekile okuzosiza ukuzolalisa isimiso sezinzwa futhi sibe nethonya elihle ekuphucululeni imisipha ngokujwayelekile;
Igumbi lapho ukubhucisa kwenziwa khona kufanele kufudumale kahle, okungenani ku-22-23 degrees Celsius;
Qiniseka ukuthi uletha ithawula elikhulu lokugeza. Bafihla ingxenye ye-hip ngesikhathi sokusikhipha.
Inqubo yokusikhipha ihlanganisa ukushintsha izindlela ezihlukahlukene: ukugaya, ukudlidliza, ukuxubha, ukubopha, ukugcoba. Ukuqala kweseshini kulula: udokotela ugoqa izinyawo nezinyawo, anakekele ngokukhethekile izithende, ama-ankle namathole, kanye nendawo yamadolo. Ngemuva kwalokhu, ukunyakaza okuhlukahlukene, okuyizingqimba nokuqondile, kwenziwa ngosizo lweminwe nezintende zezandla, qala.
Izinyawo zihlushwa ngokucindezela ngobumnene amaphuzu ngabanye ngesithupha sesandla, ukubhoboza isundu nesibindi (ukujibula).
Ukuzihlalisa izinyawo kanye nendawo kusuka ekuhlanganyeleni kwe-hip kuya ezithendebeni kuyisinqumo esihle kakhulu, kokubili ukuphumula, nokuvimbela nokwelashwa kwezifo ezithile, kusuka ku-varicose veins kuya ekutheni, ukuphazamiseka kwesistimu yezinzwa. Loluhlobo lomthelela emzimbeni alufanelekile kuphela kubantu abasha, kodwa nakubantu asebekhulile, kanye nabantwana abaneminyaka engu-12 nangaphezulu.
Indlela yokugwema imivimbo ye-varicose?
Indlela yokukhulisa i-puppy ehlakaniphile nelalelayo?
Kungani abazali bengayiqondi izingane zabo
Ubuso obunamafutha obukeka kahle ekhaya
Imibuzo enentshisekelo mayelana nezilwane nezimpendulo zabo
I-Horoscope ye-Aquarius-Abesifazane ngo-March 2017
I-shortbread Cookbook "Курамбьедес"
Inkanyezi ye-TV evelele u-Oksana Marchenko
Indlela yokubhekana nokucindezeleka kesikhumba - izimonyo zokulwa nokucindezeleka